Dill | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Ukukhula nokunakekela isitshalo esinempilo se-marjoram
Kusukela ezikhathini zasendulo, i-marjoram isetshenziswe ngabantu njenge-spice, okufaka ukunambitheka okubabayo kanye nephunga elimnandi ezitsheni eziningi, kanye nesitshalo somuthi, esilula isimiso sezinzwa futhi sikhuthaze isimo sengqondo esihle. Ngakho-ke, ukutshalwa kwe-marjoram emasimini kuye kwavame kakhulu namuhla.
Dill: ukwakheka, inani lokudla okunomsoco, izakhiwo eziwusizo
Ngamunye wethu ujwayelene ne-dill eluhlaza, eheha iphunga layo. Ngenye yezinto ezithandwayo kakhulu zokuhlobisa izitsha nokubanika ukunambitheka. Kodwa-ke, bambalwa abantu abazi ukuthi lesi sitshalo esiyinkimbinkimbi sinempahla yokuphulukisa emangalisayo. Kulesi sihloko sizobheka indlela i-dill ewusizo ngayo umzimba womuntu futhi yiziphi izinkomba ezibhekiswe ekusetshenzisweni kwayo.
Izindlela zokuvuna amadayisi ebusika ekhaya
Isitshalo esibizwa ngokuthi i-dill siyaziwa yibo bonke. Isetshenziselwa ama-saladi, asetshenziselwa ukwakhiwa kwama-marinades nama-pickle, okhethwe izitsha ezihlukahlukene. Sonke sibonga ukunambitheka okuyingqayizivele kwedill, okuyinto, ngaphezu kwalokhu, futhi kuyisitolo sokugcina samavithamini ahlukahlukene. Ngokwemvelo, ngifuna ukukwazi ukusebenzisa lo mkhiqizo unyaka wonke, bese kukhona izinkinga: idayilini ligcinwa okwesikhashana esiqandisini, futhi imifino yesitolo ivame ukungena utshani obungenakusihlwa.
Indlela yokuhlela izindlu zoNyaka Omusha noKhisimusi ngezandla zabo
Indlela yokukhula izimpande kuma-orchid?
Izinhlobonhlobo ezidumile kakhulu ze-broccoli
I-Kalanchoe yokutshala. Ukukhiqizwa nokunakekelwa ekhaya
Utamatisi obomvu we-canning - "I-Orange Pear": incazelo yezinto ezihlukahlukene, ukulima okukhethekile